Abụ Ọma 46 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
“Chineke bụ ebe mgbaba anyị”
Ọrụ dị ịtụnanya Chineke na-arụ (8)
Chineke na-eme ka agha kwụsị n’ụwa niile (9)
Ntụziaka e nyere onye na-eduzi abụ. Abụ ụmụ Kora.+ A ga-eji ụda Alamọt* kpọọ ya. 46 Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị.+ Ọ dị njikere inyere anyị aka n’oge nsogbu.+ 2 Ọ bụ ya mere na anyị agaghị atụ egwu, ọ bụrụgodị na ụwa agbanwee,Ọ bụrụgodị na ugwu dị iche iche amaa jijiji daba n’ala oké osimiri,+ 3 Ọ bụrụgodị na mmiri ya na-eme mkpọtụ, na-agbọkwa ụfụfụ,+Ọ bụrụgodị na ugwu dị iche iche amaa jijiji maka na oké osimiri na-enugharị enugharị. (Sila) 4 E nwere osimiri nke iyi ndị si na ya asọpụta na-eme ka ndị bi n’obodo Chineke ṅụrịa ọṅụ.+ Ha na-eme ka ebe nsọ, ya bụ, nnukwu ụlọikwuu nke Onye Kacha Elu, ṅụrịa ọṅụ. 5 Chineke nọ n’obodo ahụ.+ A gaghị akwatuli ya. Chineke ga-enyere ya aka mgbe chi bọrọ.+ 6 Mba dị iche iche nọ na-agba ghara ghara. E meriri alaeze dị iche iche. Ọ bara mba, ụwa wee maa jijiji.+ 7 Jehova nke ụsụụ ndị agha nọnyeere anyị.+ Chineke Jekọb bụ ebe anyị na-agbaba, aka aghara ịkpa anyị. (Sila) 8 Bịanụ, hụ ọrụ dị iche iche Jehova na-arụ,Otú o si mee ihe dị iche iche dị ịtụnanya n’ụwa. 9 Ọ na-eme ka agha kwụsị n’ebe niile n’ụwa.+ Ọ na-agbaji ụta, na-agbajisịkwa ube. Ọ na-agba ụgbọ e ji alụ agha* ọkụ. 10 “Chịlierenụ m aka elu. Maranụ na m bụ Chineke. A ga-eto m ná mba niile.+ A ga-eto m n’ụwa.”+ 11 Jehova nke ụsụụ ndị agha nọnyeere anyị.+ Chineke Jekọb bụ ebe anyị na-agbaba, aka aghara ịkpa anyị.+ (Sila)
^ O nwere ike ịbụ, “ọta.”